Lapho wena iklayenti lommeli uSteven Salami Real Estate owaboshwa? Yini okudingeka yenziwe amaklayenti akhe ngokulandelayo - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Lapho wena iklayenti lommeli uSteven Salami Real Estate owaboshwa? Yini okudingeka yenziwe amaklayenti akhe okuthengisa ngokulandelayo
Uma uthintwe nguSteven Salami, sithole imiyalo engezansi evela ehhovisi loMshushisi we-County yaseMonmouth.
Sacelwa ukuba sidlulise lesi sicelo kumakhasimende ethu athintekile:
Uke wakhonjwa yihhovisi leMshushisi iMonmouth County njengeMDC, njengesisulu, noma umuntu omele isisulu, kaSteven H. Salami. Ukhulume neDSG Kevin Mahoney, noma elinye ilunga leThimba Lobugebengu bezezimali. Sifuna ukuhlinzeka ngemininingwane eyengeziwe ezinyathelo ezilandelayo. I-MCPO isisungule uphenyo lobugebengu. Ukuze siqhubeke nalolu phenyo kuzodingeka ukuthi siqoqe imibhalo futhi sithathe izitatimende ezisemthethweni kubo bonke abahlukumezekile. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi iMDCPO izokwenza uphenyo lobugebengu, kodwa isicelo sokubuyiselwa kwemali kufanele siye e-NJ Lawyers Fund for Client Protection. Sicela ulandele izinyathelo ezintathu ezilandelayo:
Qedela Isicelo Semininingwane Yabashushisi baseMonmouth County bese uthumela imininingwane eceliwe kokulandelayo:
IHhovisi Lomshushisi laseMonmouth County
Attn: Umphenyi weSergeant uKevin Mahoney
I-132 Jerseyville Avenue
Mahhala, NJ 07728
Gcwalisa amafomu Ezimangalo ze-NJ Lawyers Fund Chelete. Imiyalo yokugcwalisa ifomu lokufaka isicelo Incwajana Yesikhwama Sezikhwama Zabameli BaseNj Isitatimende sefomu lesimangalo
Bheka ngenhla yimiyalo, ifomu, kanye nencwajana ekhuluma nge-NJ Lawyers Fund.
Isikhwama Sabaqondisi BaseNew York Sokuvikelwa Kwamakhasimende
IKomiti Lenkantolo Ephakeme yaseNew Jersey
I-25 West Market Street, i-PO Box 961
I-Trenton, New Jersey 08625-0961
Ucingo: 609-815-3030, Ext. I-52213
Hlela isikhathi sokuhlangana nabacwaningi be-MCPO bese unikeza isitatimende esisemthethweni. Uma ugcwalise amafomu amabili angenhla futhi uwahambisa womabili, ungafinyelela kuDSG Mahoney ukuhlela isitatimende esisemthethweni. Kufanele kuthathe cishe ihora le-1 lesikhathi sakho.
Ngabe “HAMP” isebenza kanjani ukuguqula imali obanjelwe e-FHA eNew Jersey?
Ngenze iphutha emlandweni wami we-New Jersey Foreclosed Case. Manje?
Izenzo Zangaphambi Kokwembulwa Kwamakhaya e-New Jersey ziphansi kusuka ku-2015, kepha kuseseyinkinga ebhekene nabaninikhaya abaningi baseNew Jersey
Yini ngempela ethengiswayo e-Hudson County Sheriff Auction?
Yini isenzo sokudalula izinto eNew York? Kuyini ukuhlengwa?
ISitatimende Sokulinganiselwa Kwezovikelo zezindaba zokudalulwa kwezinto eNew York (okwaziwa nangokuthi yiFree House Defense)